Satria ny famokarana dia iray amin'ireo fepetra takiana lehibe indrindra amin'ny mpamokatra tag, dia nanangana rafitra iray izahay izay mamela ny fitantanana mora ny fanaovana sokitra laser, mba hampihenana ny asan'ny mpandraharaha hanamora ny fizotrany. Ny tena ilaina dia ny alimo sy ny vy tsy misy fangarony.
Ny fitadiavana vokatra dia nanjary zava-dehibe tokoa amin'ny indostrian'ny fiara, izay ahitàna ireo singa fiara marobe avy amin'ny mpamatsy isan-karazany.
Ny fitazonana ny rojo famatsiana goavambe dia tena zava-dehibe tokoa hampitomboana ny famokarana sy hampihenana ny vidiny. Noho izany, ireo singa mandeha amin'ny fiara dia mitondra kaody ID, izay mety ho Barcode, Qrcode, na DataMatrix. Ireo kaody ireo dia ahafahanao mamantatra ny mpanamboatra sy ny daty sy ny toerana namokarana ilay singa. Amin'izany fomba izany dia mora kokoa ny mitantana ny olana tsy mandeha amin'ny laoniny, ka mampihena ny loza mety hitranga.
Ny rindrambaiko fanamarihana manokana BOLN dia miteraka karazana kaody rehetra, izay mifanaraka amin'ny fenitra takiana. Izahay dia mamolavola rindrambaiko manokana ho an'ny fifandraisana amin'ny angon-drakitra orinasa na mpanara-maso ny tsipika. Ankoatr'izay, ny rindrambaiko dia azo namboarina ho an'ny hetsika fampahatsiahivana mandeha ho azy mifototra amin'ny kaody voamarika.